सिभिल बैंकलाई झन्डै 'ध्वस्त' बनाएका किशोर महर्जन सेन्चुरीमा सीईओ भएर आउँदै !
ARCHIVE, BANKING, INVESTIGATION » सिभिल बैंकलाई झन्डै 'ध्वस्त' बनाएका किशोर महर्जन सेन्चुरीमा सीईओ भएर आउँदै !
काठमाडौँ - सिभिल बैंकलाई ध्वस्त बनाएको आरोप लागेका किशोर महर्जन सेन्चुरी बैंकमा आउने भएका छन् । उनी सेन्चुरी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर आउन लागेका हुन् । उनको आगमनसँगै सिभिलका केहि कर्मचारीहरुपनि सेन्चुरी आउन लागेको बुझिएको छ । बोर्डले भने अनुसार काम नगरेको भन्दै सेन्चुरी बैंकका तत्कालीन सीईओ अनुजमणि तिमिल्सीनालाई बैंकले गलत्याएपछी बैंकको सीईओ पद खाली थियो ।
यता किशोर महर्जन आउने भएपछि बैंक धरापमा पर्ने भएको छ । विशेष स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सिभिलका केहि खराब ऋणीहरुसमेत किशोर महर्जनलाई हातमा लिएर सेन्चुरीमा चलखेल गर्ने योजना बनाएर बसेका छन् । महर्जनको आगमनसँगै बैंक झन् धरासायी हुने र बैंकको सेयर मूल्य पनि घट्ने अनुमान गरिएको छ। नक्कली सुन प्रकरणदेखि ग्राहकको नागरिकता दुरुपयोग काण्डमा फस्दै आएको बैंकको स्थिति महर्जनको आगमनसँगै झन् खराब हुने अनुमान गरिएको छ ।